၂ဝ၁၉ ခုနှစ် အော်စကာဆုပေးပွဲ အစီအစဉ် တင်ဆက်သူအဖြစ် ဆောင်ရွက်ရန် ကမ်းလှမ်းခံခဲ့ရကြောင်း ဒိန? - Yangon Media Group
၂ဝ၁၉ ခုနှစ် အော်စကာဆုပေးပွဲ အစီအစဉ် တင်ဆက်သူအဖြစ် ဆောင်ရွက်ရန် ကမ်းလှမ်းခံခဲ့ရကြောင်း ဒိန?
လော့စ်အိန်ဂျလိစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၇
မင်းသား ဒိန်းသယ်ရော့ ဂျွန်ဆင်အနေဖြင့် အော်စကာဆုပေးပွဲတွင် အစီအစဉ်တင်ဆက်သူအဖြစ် ဆောင်ရွက်လိုက်မည်ဆိုပါက ယခုနှစ်ပွဲ၏ အနှစ်သာရသည် တစ်မျိုးတစ်ဖုံ ပြောင်းလဲသွားနိုင်သည်။ နပန်းသမားမှ မင်းသားဖြစ်လာခဲ့သော ဒိန်းဂျွန်ဆင်အနေဖြင့် ယခင်အစီအစဉ်တင်ဆက်သူ ဟာသသရုပ်ဆောင် ကီဗင်ဟတ်နုတ်ထွက်သွားပြီးနောက် ယင်းအလုပ်ကို ၎င်းထံ လာရောက်ကမ်းလှမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပြောဆိုလိုက်သည်။ အသက် (၄၆)နှစ်အရွယ် မင်းသားက တွစ်တာအသုံးပြုသူတစ်ဦးက “Fast and Furious 6” ရုပ်ရှင်စတား ဒိန်းအနေဖြင့် လာမည့်နှစ်တွင် ကျင်းပမည့်ဆုပေးပွဲတွင် အစီအစဉ်တင်ဆက်သူအဖြစ် ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း ရေးသားခဲ့ပြီးနောက် အကယ်ဒမီ အဖွဲ့က ကမ်းလှမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
သို့သော် မင်းသားက “Jumanji: Welcome to the Jungle” ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးကြောင့် မအားမလပ်ဖြစ်နေသည့်အတွက် အခွင့်အရေးကိုပယ်ချခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ မင်းသားက ”ကျွန်တော်တို့အားလုံး ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်က Jumanji ရုပ်ရှင်ကို ရိုက်နေတော့ အလုပ်မဖြစ်ခဲ့ဘူးလေ”ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။ ထို့ပြင် အကယ်ဒမီပွဲသည် ¤င်းအနေဖြင့် လက်လှမ်းမမီနိုင်သည့် ပွဲတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း၊ သို့သော်လည်း တစ်နေ့တွင် အစီအစဉ်တင်ဆက်သူ ဖြစ်လာ မည်ဟု ထင်ကြောင်းလည်း ပြောဆိုထားသည်။
အကယ်ဒမီအဖွဲ့က မင်းသားဂျွန်ဆင်၏ ပြောကြားချက်ကို မှတ်ချက်ပေးခဲ့ခြင်းမရှိပေ။ “Jumanji 2” ရုပ်ရှင်တွင် မင်းသား ဂျွန်ဆင်နှင့်အတူပါဝင်ခဲ့သည့် မင်းသားဟတ်က အချိန်အရှုပ်အထွေးမရှိသည့်အတွက် အော်စကာဆုပေးပွဲ ကိုတင်ဆက်ရန် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်သော်လည်း လိင်တူချစ်သူများအပေါ် မှတ်ချက်ပေးပြောဆိုမှုများကြောင့် တင်ဆက် သူအဖြစ်မှ နုတ်ထွက်ခဲ့သည်။ အော်စကာပွဲကိုလည်း အစီအစဉ် တင်ဆက်သူမရှိဘဲ ကျင်းပရန် စီစဉ် ထားပြီး ယင်းသည် ၁၉၈၉ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ပထမဆုံး အကြိမ်ဖြစ်သည်။
''တစ်ကိုယ်တော်အခွေ ထွက်ပြီးရင် သရုပ်ဆောင်ပိုင်းကို လုပ်သွားဖို့ရှိတယ်'' ပန်းရောင်ခြယ်
ရခိုင်ရှိ တိုက်ပွဲရှောင်များအား ပြည်နယ်အစိုးရက ကူညီထောက်ပံ့ပေးရန် တိုက်တွန်းသည့်အဆို ပြည?
အိန္ဒိယအရှေ့မြောက်တွင် ကျောက်မီးသွေးတွင်း ပြိုကျ၊ ၁၃ ဦးပိတ်မိပြီး သေဆုံး
ခရစ္စမတ်ကာလ လုံခြုံရေး ကမ္ဘာတစ်ဝန်း ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထား
‘ကျွန်မအချစ်ဆုံး ယောက်ျားသုံးယောက်’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို မတ် ၁၅ ရက် ရုံတင်မည်
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး ကင်ဆာဌာနတွင် မီးလောင်